PressReader - Ilanga langeSonto: 2017-08-27 - Ikaizer Chiefs iphethe uvucu lwabadlali
Ikaizer Chiefs iphethe uvucu lwabadlali
MHLELI: Iqiniso ave libuhlungu, linjengebele okuthi uma libhodlelwe yingane livuvukale, liqumbe kuze kumele ulikhame ngenkani ukuze libuyele ekubeni yibele elinobubele.
Ikaizer Chiefs ngeke iwine lutho uma kusekhona usteve Komphela, lelo yiqiniso.
Ukomphela unebhadi lokuzalwa. Umlando wakhe uyazisho ukuthi akakaze awine lutho selokhu aqala ukuqeqesha ezingeni elikhokhelayo, kangazi ukuthi ukaizer Motaung wayedidwe yini ngokomphela ngoba uneso elibanzi uma kuziwa kubaqeqeshi.
Ukomphela manje uxova abadlali kwichiefs, akanabo abadlali bakhe abali-11 angafa nabo, kuphela nje uyaqagela akazazi naye ukuthi ufunani.
Ureinelwe Letsolonyane, Siyanda Xulu nogeorge Lebese bahamba kwichiefs ngenxa yakhe engabadlalisi. Ukholelwa kakhulu koparker amakhehla.
Akekho umqeqeshi eningizimu Afrika ongaqeqesha ichiefs, kwayena ukaizer Motaung uyakwazi lokho wake wakusho kaningi. Ichiefs idinga umqeqeshi waphesheya osezingeni eliphezulu.
Uma ubheka umlando wechiefs akekho umqeqeshi omnyama owake wawina izicoco nechiefs.
Ungabala uhlehle kusukela kuJoe Frickleton, Jeff Butler, Ted Dumitru, Muhsin Ertugral nostuart Baxter bonke ngabelungu futhi benza kahle, banomlando obambekayo.
Ngicela ukaizer Motaung ake azibambele kwichiefs, azisayinele abadlali abasezingeni eliphezulu. Ichiefs kayifuni ukuthenga abadlali abasezingeni eliphezulu (quality players).
Selokhu kwathatha ubobby Motaung ichiefs yaphenduka umphuphe wekilabhu engenabadlali, inovucu lwabadlali.
Yagcina ukuba nabadlali bekhethelo ngesikhathi sopatrick "Ace" Ntsoelengoe, Leonard Likoebe, Malombo Lechaba, Computer Lamola, Teenage Dladla, Bizzah Dlamini, Shoes Mosheou, Doctor Khumalo nodonald Khuse.
Kulesi sikwati esikhona seChiefs ngeke siwine lutho, wuvucu nje lwabadlali. Umdlali okhona nguramahlwe Mphahlele, okunguye ozimiselayo kwiChiefs, bonke laba abanye wuvucu. Kumele ukaizer enze njengakudala azibambele, azisayinele abadlali bekhethelo mhlawumbe ikilabhu yethu ingabuyelwa wudumo iphinde iwine izindebe.
Amaqembu amakhulu mathathu kuphela eningizimu Afrika manje - yisundowns, Wits nesu- persport. Baba Motaung, landa urud Krol azoqeqesha ichiefs asizane nofarouk Khan nodoctor Khumalo. Phinda usilandele umxhumanisi womphakathi nabalandeli ofana nolouis Tshakoane owayengena ephuma noma kuphi lapha emzansi engafani novina Maphosa lona ohlala ehhovisi engahambeli amagatsha abalandeli.
Angimazi uvina, akakaze eze kithina balandeli lapha EKZN. Uputco Mafani ubesihambela singabalandeli, uma ichiefs izodlala ethekwini sasiba nemihlangano kukhulunywe ngezinto ezithinta ikilabhu. Selokhu kwahamba ulouis Tshakoane noputco Mafani nje kakusenzeki lokho. Siyoyicela ivuthiwe, nakuSwallows kwakwenzeka kanje, iphi namhlanje?
Innocent M Meyiwa, EHAMMARSDALE